Ita Zvaunofunga Nezvokusika PaW Fairlay Nhasi!
Fairlay ndeimwe yemabhuku emitambo asingawanzo anobvumidza vatambi vayo kuti vazvifungidzire uye vagovane kune vamwe vatengesi. Izvi zvinogonesa kumwe kuchinjika kwekuisa kubhejera nepo mikana ichisarudzwa nevatengesi. Chaizvoizvo, chero munhu anogona kugadzira fungidziro yake. Iyo webhusaiti yakatanga mu2013 uye yakagamuchira Bitcoin senzira yekubhadhara chete inogamuchirwa panzvimbo iyi.
Ramba uchiverenga izvi Bitcoin sports review kuti uwane kuti Fairlay yakasiyana sei nemabhuku emitambo yemitambo pamwe chete nehuwandu hwakawanda hunouya nawo.
Chinhu chinotonhorera pamusoro pe Fairlay ndechokuti iyo inoshandiswa neshandisi-inoshandiswa mumashamba ekufananidzira. Saka, chikwata hachigadziri mhedziso kune izvo vashandisi vanogona kutengesa. Izvozvi zvave zvichange zvichitaurirwa pa webhutaneti zvinoratidza kushamisika nekusarudza kusarudza. Aya ndiwo mazano eNBA, NFL mitambo, uye mamwe mimwe mitambo. Asi zvakare, pane vatengesi avo vakasika tsika dzepop uye zvematongerwo enyika-zvakataurwa. Chimwe chinhu chikuru ndechekuti Fairlay haatungamiri kana kutora matanho kubva kune mamwe mabhuku ezvivhisi. Izvozvo zvinopesana zvichienderana nehuwandu hwevanhu vaka "vhota" kana kuiswa mabheti pane chimwe chirevo. Hapana hutsika hwakarongeka hwekutengesa pawebsite, iyo inotanga kuwedzera kubheja kutengesa.
Iyo yemabhuku haina kupa mabhonasi akawanda kunze kwea kunyorera uye kuisa bhonasi ye1 mBTC. Kufunga kwavo kweizvi ndechokuti pasina chikonzero chekuisa dhipatimendi vasati vagamuchira bonus, vatambi vanopedzisira vashandisa zvisina kunaka bhonasi. Uyewo, apo vatengesi vane tani yemabheti asingabhadhari kushandiswa, huporofita hwavo kana kubhadhara kunowedzera kukosha. Somugumisiro, izvi zvinogona kuderedza vatambi iyo nzvimbo inobhadhara pa Fairlay.
Iyo yekufanotaura bhuku remitambo rinogona kunge riine zvimisikidzo, asi hazviite kana zvasvika pakubhadhara. Kungofanana neBitcoin-powered sports mabhuku, Fairlay inogamuchira Bitcoin seye chete mubhadharo sarudzo. Kana iwe uri mutsva kuBitcoin, kuwana mari yako yedhijitari inokurumidza, pasina kutumira magwaro ekusimbisa kuti umise account. Zvakare, inopa akawanda mabhenefiti ayo anoita kuti online kubheja kuve kwakanyanya.
Iwe unofanirwa kuva nezvinonetsa kana unoda rubatsiro, unogona kutaurirana nevamiririri vederefoni kuburikidza nefoni uye email. Asi kana iwe uchida mhinduro dzinokurumidza, pane chirongwa chekukurukura chevanhu chinowanikwa pawebsite. Pakupedzisira, vatungamiri vemusangano vane unhu hwekushanda mumusangano wechikamu Summary, iyo iwe unogona kuwana 24 / 7.
Izvo zvemitambo inogona kuva nemiganhu yayo kana uri kutsvaga chikwata chetsika. Kunyange zvakadaro, Fairlay anoda kuunza kushandiswa kwepamusoro kune nzvimbo yekutengesa paIndaneti, uye kuva nemamwe maitiro ekuisa mabheji pane zvinogonawo kureva mikana yakawanda yekukunda nekuda kwekuwanika kwezvipingamupinyi zviri nani nekubhadhara kukuru.